FB သုံးတာ ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေကြောင့် ဘေလ် ကုန်ရကျိုး နပ်နေတာပါ မျက်ရည်ခိုင်ရင်တော့ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်
Pop Pin New September 17, 2019
ဖတ်ကြည့်မှ သိမှာမို့ ဖတ်ကြည့်နော့ ဖတ်စေချင်လွန်းလို့ပါ လင်မယား စုံတွဲတစ်တွဲပါလာတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်း နစ်မြှုပ်သွားတယ်အချိန်တော်တော်ကြာမှအသက်ကယ်လှေတစ်စင်းရောက်လာတယ် အသက်ကယ်လှေပေါ်မှာ နေရာဆိုလို့တစ်နေရာဘဲ ကျန်တော့တယ် အဲဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားဖြစ်သူက သူ့မိန်းမကိုသူ့အနောက်ဆွဲချလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်အသက်ကယ်လှေပေါ်ခုံတက်လိုက်တယ် အဲဒီ အမျိုးသမီး ကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနစ်မြှုပ်နေတဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာရပ်ပြီးသူ့ယောက်ျားကို စကားတစ်ခွန်းအော်ပြောလိုက်တယ် ဒီနေရာအထိပြောပြီးတော့ ဆရာမကကျောင်းသားတွေကို မေးလိုက်တယ် မင်းတို့ ခန့်မှန်းကြည့် အမျိုးသမီးက ဘာအော်ပြောလိုက်သလဲ ကျောင်းသားတွေကတော့ အလုအယက်ဒေါနဲ့မောနဲ့ အော်ပြောကြတယ် ငါနင့်ကိုမုန်းတယ် …
နေ့စဉ်အလုပ်သွားနေရ၍ အချိန်မရလို့ ဘုရားတရားမလုပ်နိုင်ပါဟု ပြောလာသူများအတွက်ပါနံနက် မိမိမူလအိပ်ရာထချိန်ထက် နာရီဝက် စော၍ ထပါ. ငါးပါးသီလ ခံယူပါ မိမိအဆင်ပြေရာ ဂါထာတစ်ခုခုကို ပုတီး စိတ်ပါ ပရိတ်တော်များအားလုံး မရွတ်ဖတ်နိုင်လျင် မိမိအဆင်ပြေရာသုတ်တစ်ခုသာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ ည အလုပ်မှပြန်လျင် ည 9နာရီနောက်ပိုင်း ပရိတ်တော်များ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ သောက်တော်ရေချမ်းများကပ်လှူပါဆီမီးအလင်းတိုင်များ အမွှေးတိုင်များ လှူပါ ဂါထာတော်များ ရွတ်ဖတ် …
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင် မှာ စက်တင်ဘာ ၁၆ (၂၀၁၉) ရက်နေ့ မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ ပထမဆု ဘတ်ငွေ (၆) သန်းဆု 340388 (၃၄၀၃၈၈) နံပါတ် ကို တနေရာထဲ ထီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ပြိုင်တူဝယ်မိခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမား မိသားစု နှစ်စု ထီပေါက် ပေါက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ မဲဟောင်ဆောင်နဲ့…
Myanmar’s Got Talent 2019 Winner ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်သားလေး ဘုန်းမြတ်မင်း
မြန်မာ့သိုင်းပြောင်းပြန်ကိုယ်လုံပညာကို အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် စွမ်းရည်ပြခဲ့ပြီး Myanmar’s Got Talent 2019 Winner ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်သားလေး ဘုန်းမြတ်မင်း ၅ နှစ်သားလေး ဘုန်းမြတ်မင်းရဲ့ ကစားဟန်တွေဟာ 2019 Globel Got Talent မှာ မျက်လုံးပြူးစရာအကောင်းဆုံး အန္တရာယ်ရှိသောစတန့်ပြနိုင်တဲ့ ကလေးပြိုင်ပွဲဝင် ၅ ဦးထဲမှာ မကြာသေးခင်ကရရှိထားခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က …
အမှိုက်​​ကောက်​​သမားဘဝက​နေ သမီးဖြစ်​သူကို ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ​ကျောင်းထား​ပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်​
မိဘ​ကောင်း​တွေမှာ​တွေ့ရတတ်​တာက ကိုယ့်​ဘဝဘယ်​အ​ခြေအ​နေ​ရောက်​​နေပါ​စေ၊ သားသမီးအတွက်​ကို​တော့ အမြင့်​ဆုံး​ရောက်​နိင်​သ​လောက်​​ရောက်​​စေချင်​တာ အ​မြော်​အမြင်​နဲ့ယှဉ်​တဲ့ ​မေတ္တာတရားပါပဲ။ မိသားစုအတွက်​ ဒီလို ​မေတ္တာတရားမျိုးကြီးမားသူက ဖိလစ်​ပိုင်​က အမှိုက်​​ကောက်​သမား ခရစ္စတီတိုပါ။ သူက အမှိုက်​​ကောက်​ရင်း တစ်​​နေ့ တစ်​​ဒေါ်လာ​တောင်​​ကောင်း​ကောင်းမရရှာပဲ ဒီလိုဘဝက​နေ သူ့ရဲ့သမီးကြီးကို ဘွဲ့ရတဲ့ အထိ​ကျောင်းထား​ပေးနို​င်​ခဲ့ပါတယ်​။ သူက​တော့ မဟာ​အောင်​မြင်​မှုကြီးတစ်​ခု ဆွတ်​ခူးလိုက်​ရသလို သူ့သမီးအတွက်​ သိပ်​ပြီးဂုဏ်​ယူ​နေသူပါ။ ကိုယ်​တိုင်​ အမှိုက်​​ကောက်​​နေရ​ပေမယ့်​ ခရစ္စတီတိုက သူ့က​လေး​တွေရဲ့ပညာ​ရေးကို …
​စော​စော ​သေချင်​ရင်​ အရက်​များမျာ​သောက်​ကြ အရက်​​ပေးတဲ့ ဒုက္ခ ပြသနာ ​ပေါင်းချုပ်​ ဟူးးး
တဆင့်​မျှ​ဝေ​ပေးတာပါ 🙏🙏 သို့/ ​စော​စော ​သေချင်​ရင်​ အရက်​များမျာ​သောက်​ကြ အရက်​​ပေးတဲ့ ဒုက္ခ ပြသနာ ​ပေါင်းချုပ်​ ဟူးးး :'( အရက်လွန်ကဲစွာမှုးအောင်သောက်လေ့ရှိသောသူများအနာဂတ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသို့မိသားစုသားသမီးကိုဒုက္ခမပေးမိစေနဲ့အခုဘဲဒီpostဖတ်ပြီးအရက်ဖြတ်သင့်မဖြတ်သင့်စဉ်းစားသင့်ပြီ မှတ်ချက်။ ။ သွေးကြောက်သူများမဖတ်ရန် အရက်သောက်ခြင်းဟာအသဲ အစာအိမ်ကိုအရမ်းထိခိုက်တယ်နောက်ကျရင် အသဲခြောက် ရေဖျင်းစွဲအသားဝါ၊အစာအိမ်မှာအနာရှိ ပိုက်အောင့်ပိုက်နာမတရားခံစားရ၊အစာအိမ်ပေါက်ခွဲစိတ်ရ တာတွေဖြစ်လာမယ်ဝေသနာခံစားရမယ်နောက်တွေ့နေကျတစ်ခုသွေးတိုးပြီးဦးနှောက်သွေးကြောပေါက် ကံကောင်းလို့ရှင်ရင်လည်းတစ်သက်လုံးလေဖြတ်မိသားစုသားသမီးကိုဒုက္ခပေး နောက်ဆုံးဆိုးရင်တော့ဒီလိုသွေးအန်ခြင်းနဲ့ဆေးရုံခဏခဏတက်ရလိမ့်မယ်သွေးအန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက အစာရေမြို လမ်းကြောင်းကအသဲခြောက်လို့သွေးကြောထုံးကုန် ပြီးပေါက်(ပုံမှာကြည့်ရန်)နှင့် အစာအိမ်အနာကဆိုးလို့အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်သွားလိုတချို့ကမအန်ဘဲသွေးဝမ်းတောက်လျှောက်သွား တကယ်လည်းဆေးလောကမှာတွေ့ရတယ် …
ရင်တွေနာလိုက်တာ ကိုယ့်သားသမီးကို ရောင်းစားရက်တယ်….(ရုပ်သံ)ကြည့်ရန်
ရင်တွေနာလိုက်တာ ကိုယ့်သားသမီးကို ရောင်းစားရက်တယ်….(ရုပ်သံ)ကြည့်ရန် ပိုက်ဆံရဖို့ ဒီနည်းလမ်းပဲရှိတော့တာလားဗျာ …..စိတ်မကောင်းပါဖူး ခလေးရယ်… ကိုယ့်သားအရင်းကို ရောင်းစားလိုက်တဲ့မိဘ..ကလေးကိုသနားပါတယ် သူ့ခမျာမိဘနဲ့မခွဲချင်လို့ငိုနေတာ…မိဘ အသစ်နဲ့ပျော်ရွင်ပါစေ….. သနားလိုက်တာခလေးရယ် …. ရင်ထဲကို ဆို့နင့်သွားအောင် ခံစားရပါတယ် …. ကျန်တာတော့ ဘာမှမပြောလိုတော့ပါဖူး ပြောလဲမပြေချင်တော့ပါဖူးဗျာ ….. မိဘအသစ်နဲ့ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ ခလေးရယ် …..poppinnew.com video ဖိုင်ကို …
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံဒေသအထက်ဘက် လယန်ရွေမှော် ကုန်းကျင်းမှရသော သဘာဝတွင်းထွက်ရွှေတုံးများ။ ( မြစ်ဆုံကို တရုတ်ဘာလို့အဲ့လောက်လိုချင် နေလဲ ဆိုတာသဘောပေါက်)။ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံဒေသအထက်ဘက် လယန်ရွေမှော် ကုန်းကျင်းမှရသော သဘာဝတွင်းထွက်ရွှေတုံးများ။( မြစ်ဆုံကို တရုတ်ဘာလို့အဲ့လောက်လိုချင် နေလဲ ဆိုတာသဘောပေါက်)။ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံဒေသအထက်ဘက် လယန်ရွေမှော် ကုန်းကျင်းမှရသော သဘာဝတွင်းထွက်ရွှေတုံးများ ။( မြစ်ဆုံကို တရုတ်ဘာလို့အဲ့လောက်လိုချင် နေလဲ ဆိုတာသဘောပေါက်)။ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံဒေသအထက်ဘက် …
(ဇနီးမယားဆိုတာ ပိုက်ဆံ ပေးစရာလိုတဲ့ ပြည့်တန်ဆာ မဟုတ်ဘူးနော်)
(ဇနီးမယားဆိုတာ ပိုက်ဆံ ပေးစရာလိုတဲ့ ပြည့်တန်ဆာ မဟုတ်ဘူးနော်) မိန်းမကို ချစ်ပါ….. အသုံးမချပါနဲ့ မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့ ချစ်ပါ တန်ဖိုးထားတဲ့ စိတ်နဲ့ ချစ်ပါ… မိန်းမ ကို လိုသုံးအဖြစ် မဆက်ဆံကြပါနဲ့….. မိန်းမ ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပျော်ရွှင်အောင်ထားပါ… မိန်းမ ကို ထမင်းစား ရေသောက်လောက်တာ သဘောထားပြီး…. ဟင်းအရသာ မြည်းစမ်းသလို မဆက်ဆံကြပါနဲ့….. …
ကာမရာဂ စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုအတွက်နဲ့ ဖြစ်တည်လာတဲ့ ဒီသွေးသားက လေဥဥပြီးရလာတာမဟုတ်ဘူး
လူ့ တိရိစ္ဆာန် တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အန္တာရာယ်ကာကွယ်ဖို့ အတွက် နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် ဘယ်လိုမှအကြောင်းတရားမညီညွတ်လို့မရှုနိူင် မကယ်နိူင်ဖြစ်လာပြီဆိုလဲ ဒီအရွယ်ထိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီ မွေးဖွားလာပြီဘဲ ကိုယ့်ရပ်တည်မူ့ တစ်ခုအတွက် ကိုယ့်ရင်သွေးကိုစွန့် လွှတ်ရပြီထားဦး ဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး အသက်ရှင်လျှက် တစ်ပါးသူလက်ထဲရောက်ပါစေပေါ့ စာနာသနားလို့မိခင်စိတ်ရှိသူနဲ့ ဆုံခဲ့မယ်ဆို ဒီကလေးလူဆက်လက်ဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလား ကာမရာဂ စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုအတွက်နဲ့ ဖြစ်တည်လာတဲ့ ဒီသွေးသားက …